Xulashada cusub ee Janaayo | Suugaanta Wararka
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 01/01/2022 12:00 | La cusbooneysiiyay 29/12/2021 18:25 | Buugaag, Novela, Riwaayad madow
Sannad kale oo soo socda oo la raran yahay akhrin cusub. Tani waa a xulashada magacyada qaar kuwaas oo la sii daayo Janaayo. Wixii dhadhan kala duwan iyo magacyo heer qaran iyo heer caalami ah.
1 Mashruuca Silverview - John Le Carré
2 Gabdhaha kale - Santiago Díaz
3 Forge of a Rebel - Lorenzo Silva iyo Noemí Trujillo
4 Shan jiilaal - Olga Merino
6 Meeraha - Susana Martín Gijón
Mashruuca Silverview - John Le Carré
Waxaan ku bilaabaynaa sheeko qadiimi ah oo leh taariikh dheer sida Le Carré. Sheekadiisa cusub waxa ay ina baraysaa Julian Lawndsley, kaas oo ka tagay shaqadii uu u baahnaa ee magaalada London si uu ugu noolaado nolol fudud isaga oo ah mulkiilaha dukaanka buugaagta ee magaalo yar oo xeebta ku taal. Laakin dhowr bilood ka dib caleema saarka, booqashadii ayaa hakisay xasilloonida Julian: tii Edward Avon, soo galooti Polish ah oo ku nool Silverview, guri weyn oo ku yaal duleedka magaalada, kaasoo u muuqda inuu wax badan ka yaqaan qoyska Julian oo muujinaya wax badan. xiisaha uu u qabo socodsiinta ganacsigiisa yar.
Hablaha kale - Santiago Diaz
Santiago Díaz waxa uu u saftay kulankiisii ​​ugu weynaa ee sheeko-yaqaanka Aabaha wanaagsan Taas oo uu ku kasbaday guul muhiim ah iyo akhriste. Hadda waxa uu la soo laabtay horyaalkan labaad ee uu mar kale xiddig ka noqdo kormeeraha Indira Ramos. Waxaan helnay iyada oo ku qaadanaysa maalmaha ugu dambeeya ee fasaxa magaalo yar oo ku taal Extremadura iyo goorma ku noqo shaqada Magaalada Madrid, aad ayey ugu adag tahay inuu ka hor tago ku xigeenka Isbatooraha Iván Moreno, kaasoo uu ka qarinayo sir weyn.
Si kastaba ha ahaatee, waa inay mar kale wada shaqeeyaan si ay u xalliyaan kiis cusub: saldhiga shidaalka ee cagaha lugta faraha kii sanadaha badan ahaa ninka loogu doon doonista badan yahay dalka. Dilka arxan darada ah ee uu geystay ayaa waxa uu ku tilmaamay in boolisku aysan sii hayn karin eedeysanaha ugu weyn, kaasoo muddo ku hoos noolaa aqoonsi been abuur ah. Laakin Ramos waxa uu ku qanacsan yahay in uu yahay gacan ku dhiigle isaga oo kale ah waa inuu mar kale dilor, markaa waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad heshid dambi aanad ku dhicin ciqaab la'aan.
Been abuurka jabhadda - Lorenzo Silva iyo Noemí Trujillo
Lorenzo Silva ayaa furay 2022 laba jeer iyada oo cinwaankan lagu qoray afar gacmood mar kale Noemí Trujillo. In ay ku qaataan Kormeere Manuela Mauri in, laga bilaabo bilowga ah ee digtoonaan caafimaad, ma uusan helin neefta oo markii ugu horeysay noloshiisa ayaa dareemaya culeys badan by dhacdooyinka. Kadib, iyo weliba, a dambi labalaab ah Wixii ka dhacay Alcalá de Henares waxay kaa qaadayaan hurdo: Carlota, oo ah gabadh sagaal iyo toban jir ah, ayaa boliiska ogeysiisay markii ay aragto aabaheed iyo hooyadeed oo lagu toogtay gurigooda. Xisbi sharci darro ah iyo marag furka toban dhallinyaro ah oo dagaal kula jira bulshada ayaa fure u noqon doona xallinta kiiska.
Intaa waxaa dheer, Silva ayaa sidoo kale soo bandhigaya Gacanta Esther, hal ururinta maqaallada wakhtiga xaadirka ah ee laga bilaabo gu'ga 2020 ilaa badhtamaha dayrta 2021.
Shan jiilaal - Olga Merino
Olga Merino ayaa degay Moscow wariye ahaan Wargeyska Catalonia December 1992, wax yar burburkii Midowgii Soofiyeeti ka dib. Halkaa waxa uu ku qaatay shan jiilaal oo uu ahaa marqaati u ah isbedel dhan oo casri ah taas oo sidoo kale calaamad u ah ka hor iyo ka dib noloshiisa gaarka ah. Qormadan xusuus-qorka ah ee gabadh siddeed iyo labaatan jir ah, waxay nooga warramaysaa sida ay u higsanayso riyada ah in ay noqoto qoraa, sumcadda suxufinimo, iyo jacayl buuxa oo sarreeya. Wax kastaaba way ka duwan yihiin codka maanta ee fikirkaas.
Maxaa ku cusub Isabel Allende waxaa jilaya magaca naag: Violeta, oo adduunka soo gashay maalin duufaano ah 1920 waana ilmihii ugu horeeyay qoys ka kooban shan caruur ah oo wada dhashay. Laga bilaabo bilawga noloshaada ayaa lagu calaamadayn doonaa dhacdooyin aan caadi ahayn. Weli waxaa jira dhawaaqyo ku saabsan dagaalkii weynaa markii hargabka Isbaanishka uu soo gaaro xeebaha waddankii uu u dhashay ee Koonfurta Ameerika, ku dhawaad ​​wakhtiga saxda ah ee uu dhashay.
Mahad aabbihiis, qoysku waxay ka soo bixi doonan dhibkan si ay ula kulmaan mid cusub: Niyad jab weyn waxay carqaladeeyaan nolosha quruxda badan ee Violeta ilaa markaas. Qoyskaaga ayaa lumin doona wax walba waxaana lagu qasbi doonaa in uu ka fariisto a deegaanka duurjoogta ah oo ka fog dalka. Halkaa Violeta way weynaan doontaa oo way heli doontaa dacwoodaha koowaad.
In a warqad loola hadlay qof ay ka jeceshahay dhammaan dadka kale, Violeta waxay xasuusataa wax xun jacayl niyad jab iyo jacayl xamaasad leh, daqiiqado faqri iyo barwaaqo, khasaare aad u xun iyo farxad xad dhaaf ah.
Meeraha - Susana Martín Gijón
Waxaan ku soo gabagabeyneynaa sheeko kale oo ah Waddada Vargas, kormeeraha caanka ah ee Martín Gijón. Sheekadan cusub muuqaalka kore ee koorsada Golf ee ah bakhti dhiig qof dumar ah oo hubinaya Kooxda Dilalka ee Sevilla. Sidoo kale, dhibbanaha Cagaha way ka gooyeen. Vargas waa inuu baabi'iyaa fasaxa la qorsheeyay ee Paco Arenas, lataliyihiisii ​​​​hore iyo jacayl qarsoodi ah oo uu ugu dambeyntii u aaday inuu la noolaado. Waa markiisa si uu u baaro bartamaha magaalada feejignaanta ugu badan ee xaaladaha cimilada oo ay khasaareen roobab mahiigaan ah oo dhowr jeer la la’yahay.
Dhanka kale, waxaa isa soo taraya wararka sheegaya in dilaaga lagu naaneeso Animalista weli wuu noolaan karaa Kaligiisna kuma dhaqmi doono, maadaama rag harag leh ay ka soo muuqdeen beer, waxaa dhacday dhacdo dhiig ku daatay oo ka dhacday aquarium-ka iyo dhac dahsoon oo ka dhacay dekedda Huelva. Laakin dhawaan guutadaasi oo dhami waxa ay gali doonaan tartan ka dhan ah wakhtiga si ay malaayiin qof uga badbaadiyaan khatar aad u weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Noocyada » Novela » Doorashada cusub ee Janaayo
Gloria Fuertes: gabayo